ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်: ဘုရင်ခဏဖြစ်သွားတဲ့ ကျွန်တော် ...
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Saturday, October 27, 2007
ခေါင်ထိ အကုန်စားတဲ့။ ဘုရင်ကျတာနဲ့ ပွဲက ပြီးသွားပြီလေကွာ။ မင်းဆိုး မင်းယုတ်ဆိုရင်တော့ မြန်မြန်ပြုတ်ပါစေ ဆုတောင်းရမှာပဲပေါ့။
essay လေးပါ အစ်ကို
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မေးနေရသေးတယ် နဘလရယ်..
ခုလိုပဲ ကိုယ်သိတာတွေကို ဝေမျှ..
လူတိုင်းကို ကိုယ်သိတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်နိုင်အောင်
ကိုယ်က ဦးဆောင် လုပ်ပြလိုက်..
(တကယ်ပြောတာနော်။ လူချင်းတွေ့ရင်လဲ ဆွေးနွေးကြသေးတာပေါ့ ဟဟ)
တကယ်တွေးနိုင်နေပြီဆိုရင်ပဲ တ၀က်အောင်နေပြီ နေဘုန်းလတ်ရေ...
တကယ် ဆိုလိုချင်တဲ့ ဆိုလိုရင်းက သိပေမယ့် တင်ပြပုံက ဘုရင် စနစ်ကို ထင်ဟပ်သွားတာ ခက်နေတယ်။ ခက်တာက ဘုရင် စနစ်ကို တမ်းတစိတ် ရှိနေရင်ကို အာဏာရှင် ဆန်သွား တတ်ကြ တာပဲ… ဘုရင် စနစ် ကြီးကို ကမ္ဘာက ပစ်ချခဲ့ ကြတာ ကြာပါပြီ အာဏာရှင် အရိပ် သန်းတဲ့ စနစ်တွေကိုလဲ ကျော်ဖြတ် နေကြ ပါပြီ ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို လူတွေ တောင်းဆို နေကြ တာပေါ့။ မမ ခင်မင်းဇော် ပြောဖူးတဲ့ စကားလေး ကိုတော့ တအား ကြိုက်တယ်။ အားလုံးဟာ ပြည်သူပဲ။ အရင် သိသူက မသိသူကို လမ်းပြ တာပဲ ရှိတာ။ ခေါင်းဆောင်တွေ ငယ်သား နောက်လိုက်တွေ သတ်မှတ် ခွဲခြား နေစရာ မလိုဘူး အားလုံး ပြည်သူပဲ တဲ့။
ကစားဝိုင်းထဲက ဘုရင်တစ်ယောက်အဖြစ်က မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ လက်တွေ့ဘ၀မှာ ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ ကိုယ်မို့ ဘုရင်ဖြစ်ဖို့ ကံပါလာခဲ့ရင်လဲ မင်းကျင့်တရား ၁၀ပါးရှိတာကို သေချာနားလည်ကျင့်သုံးလို့ (တိုင်းသူပြည်သားကို ရင်ဝယ်သားလို ကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဲ နတ်ရွာစံရမှာသိသလို ပြောင်းပြန်ကျင့်သုံးရင်လဲ ငရဲမှာခံရမှာသိတဲ့ ) အဲဒီလို အသိဥာဏ်လေး ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ခေတ်နဲ့ သူ့အခါ ကြုံလာလို့ ဘုရင်လုပ်သင့်လဲ လုပ်ရမှာပေါ့ ။ တခါတလေမှာ ရွေးချယ်ခွင့် မရှိတဲ့ လူ့ဘ၀အခြေအနေထဲမှာ နေတတ်သေတတ်သူဖြစ်ဖို့ပဲ လိုတာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်တာပါ။
Good post, my dear. By the way, I've seen this chess setting in one of hotels in Ngwe Saung Beach. :P
အေးကွ.... အခု အဲဒီအရုပ်တွေ မရှိတော့ဘူး။ အခုက ကျားကစားတဲ့ အရုပ်တွေ ဖြစ်နေပြီ။
ဘုရင်မကြီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေဘုန်းလတ်